Noma yimuphi umama uyazi ngezinzuzo ibele. Kusukela zikhathi yokuqala lokuzalwa, ngisho egumbini ukulethwa, ingane lisetshenziswa ebeleni likanina. Manje unina amandla yokudla inendima enkulu e inhlalakahle, nokuthula nempilo umntanakho.
Umbuzo ka umsoco ofanele ngalesi sikhathi ekuphumeni kusukela osukwini lokuqala esibhedlela. Ngisho kwimenyu esibhedlela ngokuvamile kuhlanganisa imikhiqizo akuzona efiselekayo ukusetshenziswa ngesikhathi ibele. Dee izihlobo egijimela aphathe umama osemusha esihlwabusayo.
Kungani kunendaba efanele umsoco umdlezane, ukucabanga kwakhe? Umsebenzi oyinhloko ibele - uhlinzeke ingane izakhi ezidingekayo. Futhi ngisho, kunokuba umntwana, futhi kuba kakhulu unina. Yileyo ndlela emzimbeni umama osemncane ukuthi ingane ithola esitokisini kwemithombo, ngenxa kakhulu umama kungase kunganeli.
Amanye amaqembu umkhiqizo kungadala umntwana ukuganga isimiso sokugaya ukudla bungene, pheshana emathunjini: colic, ukuqunjelwa, uhudo. Ngakolunye ukuphendula okwalandela - yokungezwani komzimba. Ukuze colic kungaholela ukudla ukudla umama ukushaya ukubuyisa. Kuyinto amazambane iklabishi, uphizi, amagilebhisi, ubisi, ubhontshisi, isinkwa, zucchini, amagilebhisi, isitshalo seqanda, apula eliluhlaza.
Ukuvimbela ukuqunjelwa baby ukudla umama yokudla akufanele iqukathe eziningi izinhlobo ezahlukene amakhekhe, isinkwa namazambane. Baningi impela ukudla kungabangela ukusabela iguliswa futhi diathesis futhi diathesis. Lokhu izithelo ezisawolintshi, imifino elibomvu futhi izithelo, amajikijolo, izithelo zasezindaweni ezishisayo, inyama, amaqanda, isikhuphashe, crab, ubisi cow sika, uju. Shintsha ukunambitheka ubisi lwebele ezihlukahlukene izinongo, garlic, onion, noma ikuphi ukudla okubabayo. Izingane ayizwani ushintsho zokunambitha, okuyinto kungaholela Ukuyekwa kwezindlela ubisi lwebele.
Kufanele zisuswe kusuka ukudla umama imenyu equkethe kwamakhemikhali ahlukahlukene, dyestuffs, nezivimbelakuvunda. Ngempela uvinjelwe kuyinto utshwala. Kusukela iziphuzo aluqede ngokuphelele soda.
Manje, ukuthi kufanele ngempela zifakwe ekudleni nsuku zonke umama yokudla.
- inyama, kuphela olunamafutha amancane noma grade ukukhanya (lokhu turkey, unogwaja, inkukhu);
- inhlanzi mafutha (lokhu perch, i-hake, ama-cod). Ikakhulukazi ukunakwa mackerel, kuba allergenic, it is hhayi Kunconywa ukuba isetshenziswe;
- okusanhlamvu (nokunye okufana nokolweni, amabele, i-oats, amabele);
- imifino, izithelo e ngokuphelele nganoma iyiphi indlela. Lona emthonjeni oyinhloko amavithamini;
- imithombo fat (amafutha ahlukahlukene);
- imikhiqizo yobisi, cottage shizi, ushizi. Shizi ojiyileyo eziningi calcium ewusizo, okuyinto umane nje udinga ukuba oncelisayo. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela lesi sici esibalulekile kuzoholela izinwele iconsi abanamandla, namazinyo unina ompofu, flaking ngezipikili ziyaqothuka;
- isinkwa ngokulinganisela;
- esetshenziswa odokotela iziqondiso ezicacile athuthukiswe ngqo ukusetshenziswa e ukuncelisa Vitamin - izakhiwo yezimbiwa.
umama Nutrition ubuhlengikazi lolulingene, kodwa lokho kumane nje ukuze kuzuze ingane. Kancane kancane uvala bayokuwa futhi uzobuya imikhuba futhi ukudla. Okunzima kakhulu ngokuya kwamandla - ngezinsuku zokuqala esibhedlela. Ngisho ku ezejwayelekile apple juice zingavela ukusabela nomzimba. Izihlobo nomyeni wakhe kufanele ibuzwe ukuletha asanda ukwenziwa noma nokunye okufana nokolweni iphalishi, abilisiwe inyama mafutha noshizi ngempela. Ukuze ukukhiqizwa evamile ubisi isiphuzo okungenani ezimbili amalitha ketshezi, njengoba inani ukuncipha ubisi ukufika.
Ngemva ocucuzayo, izinguquko nabancelisayo Ukudla kancane kancane wanezela imifino nezithelo, ngisho ngesonto sengezwe izinhlanzi noshizi. Ekupheleni kwenyanga yokuqala yokuphila komntwana yethulwe ekudleni amazambane kanye namaqanda. Khona-ke kancane kancane wanezela kwimenyu yonke eminye imikhiqizo, futhi ukusabela wengane kuyaqashwa, uma asilandelwanga, ke nawe ungadla lo mkhiqizo ngokuphepha.
Imithi elwa namagciwane kwabesifazane abakhulelwe: ejenti egunyaziwe
Ascorbic acid ngesikhathi sokukhulelwa
Plums ekukhulelweni: inzuzo kanye nokulimala
Ihlahlubo: symphysis ngesikhathi sokukhulelwa
Glycine ekukhulelweni. Ingabe anginandaba nayo?
Kuyasiza ukuba ikhulelwe. Ukunakekela umama okhulelwe nengane
Garden ifenisha ngezandla - kungcono ngempela!
"Nayzilat": yokusetshenziswa, ukubuyekezwa. Izidakamizwa analogue "Nayzilat"
Nerina imbali: zokutshala kanye nokugcinwa endle
"Russia namaSoviet": esenina inkondlo ukuhlaziywa ngokomongo imbongi
Impressionism Museum e Moscow, ikheli, unomphela kanye nemibukiso zesikhashana